1. Connect Android inay Mac
2. nidaameed Android la Mac
Just ku xirnayn cable USB si aad u hesho Android phone ama kiniin ku xiran Mac ah, balse waxba ma dhicin? Taasi waa run. Mac ma ogaan karo iyo in la aqoonsado phone Android ama kiniin ah, keliya ha korto sida drive dibadda adag. Xaaladdan oo kale ah, waxaa suurtagal ah in lagu wareejiyo music, playlists, filimada, sawiro iyo faylasha kale oo ka phone Android ama kiniin on Mac? Sida aad u samayn karaa?
Waa hagaag, in la isticmaalo Android on Mac, waxaad sawiri kartaa taageero ka qaar ka mid ah qalabka dhinac saddexaad. Halkan waxa ku jira 3 oo ka mid ah: TunesGo Wondershare u Android, Transfer File Android iyo Samsung Kies u Mac. In qaybta 1, waxaan jeclaan lahaa inaan soo bandhigo software 3 aad ee faahfaahin ah.
Qaybta 1. 3 Software si fudud Connect Android inay Mac Qaybta 2. Guide Tallaabo-tallaabo ah oo Tethering USB ee Android inay Mac
Qaybta 1. 3 Software si fudud Connect Android inay Mac
1. Wondershare TunesGo u Android (Mac) 2. Transfer File Android 3. Samsung Kies 3 Mac
1. Wondershare TunesGo u Android (Mac)
Markab Just boodi ka iPhone, iPad ama iPod in aalad Android, sida Google Nexus 5, laakiin waxa ay ku kaydsan tan oo songs, filimada ee Lugood oo aadan rabin in gadaashiisa kaga tegi doono? Sida la isticmaalayo Lugood si ay u maareeyaan oo dhan files warbaahinta iyo dooneysa inay dajiyaan playlists iyo videos ka qalab Android aad, waxa uu u ciyaaro? Haddii taasi waxa weeye waxa aad rabto, Wondershare TunesGo u Android (Mac) waa software ugu fiican ee aad u. Waa software si sahlan loo isticmaalo, taas oo kuu oggolaanaysa in aad u hagaagsan files warbaahinta u dhexeeya Lugood / Mac iyo qalab Android aan ka kaaftoomi kasta.
1. Hagaagsan oo dhan maktabadda Lugood in Android la click hal
2. Nidaameed ama jiita iyo hoos u xushay songs, playlists, filimada iyo ka badan oo ka Lugood in Android.
3. Bedelka files warbaahinta Android inay Lugood bey u fududayd.
4. Copy music, videos, files document iyo sawiro ka Mac in Android by jiiday iyo kala go'in.
Jidka Connection: Waxaa kuu ogolaanaysaa qalab Android xiran Mac leh cable USB Android.
1. Waxay leedahay interface kooban.
2. Waxaad tahay xirfad u isticmaalaya xitaa haddii aad isku day hore.
3. Waxa ay taageertaa 2000 + qalabka Android, oo ay ku jiraan Samsung, Sony, Google, HTC, Motorola, LG, Huawei iyo dheeraad ah.
4. Waxaa si buuxda la jaan qaada Android (ka Android 2.1 si ay Android 4.4).
Qasaarooyinka: Ma ahan lacag la'aan ah.
2. Transfer File Android
Transfer File Android loo abuuray by Google, inta badan loo isticmaalo si aad u maamuli qalab Android aad ku Mac si xor ah. Waxaa dalka buuraha leh kartaa qalab Android aad sida drive dibadda adag, si aad u ka Android wareejin karaan xogta si Mac iyo qeybsanaan.
1. Buur qalabka sida Android ah drive dibadda adag.
2. Fur folder ama file badbaadiyey kaarka SD qalab Android aad ka.
3. Bedelka music, video, sawiro iyo document files iyo ka Mac.
Jidka Connection: Waxa ay u ogolaataa xira Android inay Mac via ah cable USB Android.
1. Waa lacag la'aan ah.
2. Waxaad u fudud in ay kaarka SD qalab Android aad u helaan.
1. Ma loo isticmaali karaa marka Samsung Kies la geliyo.
2. Waxaa inta badan ku guuldareysto in la ogaado qalab Android aad.
3. Waxa kaliya ee ay u taageeraan 3.0 Android oo kor u.
3. Samsung Kies 3 Mac
Samsung Kies 3 Mac loo abuuray by Samsung, si aad u caawiso maamulka Samsung qalab on Mac lacag la'aan ah. Sidaa daraadeed, aad wareejin karaan xiriirada, music, video iyo xiriirada iyo ka qalab Android, raad raac iyo soo celinta xog telefoonka iyo tayeynta firmware.
1. Import iyo dhoofinta music, video, xiriirada, sawiro iyo Nayroobi.
2. Waxyaabaha kaabta aad Samsung qalab si Mac oo si nabad ah loo soo celiyo.
3. La soo iibiyo barnaamijyadooda ka Galaxy Apps in aad qalab Samsung Galaxy.
4. Hagaaji firmware ugu dambeeyay ee aad qalab Samsung.
Jidka Connection: Waxa isku xira phone Android inay Mac la cable USB ah.
1. Waxaa gebi ahaanba bilaash ah.
2. Waxay leedahay waxyaalo badan socodyada muhiimka ah ee aad u maamuli lahayd qalab Samsung.
1. Waxa kaliya ee ay u taageeraan qalab Samsung.
2. Waxaa inta badan ku guuldareysto in ay ku xidhmaan qalab Samsung.
Qaybta 2. Tallaabo-tallaabo Hagaha Tethering USB ee Android inay Mac
Waxaad yarna kartaa qalab Android aad la leedahay Mac iyo in aad yeelan doontaa in ay isticmaalaan codsiga cid saddexaad. Halkan waxaan HoRNDIS loo isticmaalo sida codsiga xisbiga saddexaad. Waxaad kartaa download nooca ugu dambeeya ee HoRNDIS .
Ka dib waxa ay soo degsado, waa in aad ku rakibi aad Mac ka dibna xirmaan telefoonka aad Android inay Mac isticmaalaya cable xogta. Hadda ka menu wargelinta galaan Settings qalabka android aad.
Markaa waa inaad aadaa Wireless & Networks qalabka sida ku cad dhinaca bidix ee sawirka kor ku xusan meesha aad yeelan doontaa inay taabtaan on Tethering & kulkulul la qaadan karo . Markaas menu cusub muuqan doonaa sida sawirka dhinaca midig. Sida ku cad waxaa Dooro TETHERING USB ka dibna qalab Android loo tethered doonaa Mac. Xusuusnow, waa in aad la xiran shabakada macluumaadka ama wifi ah in la sameeyo shaqadan.
Nidaameed Android inay Mac Helo dhammaan faylasha
Lugood Best u Android Software Waxaad u
Music Transfe ka Lugood in Nexus 5/7/4
> Resource > Android > 3 Software in ay ku xidhmaan Android inay Mac Si fudud